Waxqabadka xukuumadda Soomaaliya & todobaadkii tegay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waxqabadka xukuumadda Soomaaliya & todobaadkii tegay
A warsame 20 September 2014 20 September 2014
WAR-SAXAAFDEED: Mogadishu, 20 September 2014 – Wasiirka Warfaafinta Mudane Mustafa Sheikh Ali Dhuhulow oo hadlayey warbaahinta ayaa siiyey warbixinta horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay. Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Dib u heshiisiinta ka socota Kismaayo, Dib u heshiisiinta ka socota Baydhabo, horumarka tirokoobka dadweynaha, horumarka waxbarashada dalka, shirka amniga ee London, iyo howlgalada militariga ee Badweynta Hindiya.
Wasiirka Warfaafinta oo ku bilaabay shirka dib u heshiisiinta ee ka furmay Kismayo ayaa yiri “Dowladda Federaalka oo in muddo ahba waday dhaqangelinta heshiiskii Addis Ababa ee Maamulka Jubba iyo Dowladda Federaalka ayaa 16kii September 2014 waxaa lagu guuleystay in shir dib u heshiisiineed uu magaalada Kismaayo ka furo Madxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Ujeedada shirkan ayaa ah in dadka deegaanka laga qeybgaliyo go’aan gaarista masiirka dalka iyo kan deegaankaba, waxaana la filayaa in shirkan dib u heshiisiinta oo ay ka qeybgalayaan dadka deegaannada Jubadda Hoose, Jubadda Dhexe iyo Gedo in uu soo dhameystiro awood qeybsiga iyo dhismaha Maamul Goboleedka Jubba. Shirweynahan waxaa goob joog ka ahaa xubno ka socday labada gole ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wakiilo ka socdey beesha caalamka sida UNSOM, EU, IGAD iyo kuwo kale. Shirkan oo ay hormood ka tahay Dowladda Federaalka ayaa Madaxweyanaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu dhiiri geliyey dib u heshiisiinta sheegeyna in la soo maray marxalado kala duwan, haddana loo baahan yahay in dhammaan bulshada la wada gaaro oo inta ka maqan shirkana si diiran loogu soo dhoweeyo. Madaxweynaha ayaa ammaanay doorka Maamulka Jubba iyo dulqaadka ay u sameeyeen in dadku wada hadlo kana codsaday in la sii labo laabo dadaalka dib u heshiisiinta oo talada dadka deegaanka ay ka timaado.
Madaxweynaha ayaa ku dhiiri geliyey maamulka iyo ka soo qeybgalayaashaba in dadka wax tabanaya lagu soo daro shirka oo loo muujiyo dabacsanaan. Madaxweynaha ayaa yiri Dowladda Federaalku waa idinla joogeysaa oo waa fududeyneysaa shirka waxaana ka go’an in meeshaani maamul ka dhismo kaas oo u adeega dadka degan gobollada Jubbooyinka iyo Gedo gacana ka geysta dib u dhiska guud ee dalka.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey Shirka dib u heshiisiinta ka furmay Baydhabo ayaa yiri “14kii September 2014 Gudoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa si rasmi ah uga furay Baydhabo shir weynaha dib u heshiisiinta shacabka ku dhaqan gobollada Koonfur Galbeed. Ra’isulwasaaraha Xukuumadda Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed, Wasiirro, Xildhibaanno, Odayaasha Dhaqanka ee gobolladan, ururrada bulshada rayidka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa goob joog ka ahaa. Ra’isulwasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa uga mahad celiyey Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo wafdigiisa dadaalka faraha badan ee ay geliyeen sidii bulshadan is faham loo dhex dhigi lahaa waxaana uu dhanka kale ballan qaaday in Xukuumaddu ay si buuxda u garab taagan tahay qabashada shirkan oo natiijadiisu ay noqon doonto ugu dambeyn dhisidda Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed ee Baay, Bakool iyo Shabeelada Hoose. Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in shir weynahan uu furan yahay, kulana dardaarmay ergada ka qeybgalaysa in laga doonayo mudo 45 cisho gudahood iney ku gudagalaan ajandayaasha horyaala oo kala ah dib u heshiisiinta iyo is cafinta shacabka, mideynta aragtiyooyinka kala duwan ee la xiriira sameynta maamulka koonfur Galbeed kadibna la gudagalo dhismaha Maamulka KMGka ah ee Koonfur Galbeed.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka tirokoobka dadweynaha ayaa yiri “ 18kii September 2014 ayaa Muqdisho lagu soo daahfuray bilowga sahanka tirakoobka dadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibadiisa. Wasaarada Qorsheynta & Iskaashiga Caalamiga ah iyo hay’adda QM ee UNFPA ayaa iska kaashaday qorshahan ballaaran ee muhiimka u ah hiigsiga 2016ka. Wasiirka Wasaarada Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga Mudane Saciid Cabdullahi Dani ayaa sheegay in qorshahan uu soo maray marxalado kala duwan, isla markaana sheegey inay muhiim tahay in la ogaado tirada dhabta ah ee dadka Soomaaliyeed. Ku-Simaha Ra’iisul Wasaaraha ahna Wasiirka Diinta iyo Awqaafta oo soo gabagabeeyay munaasabadan ayaa tilmaamay in horumar uusan jiri karin hadii uusan jirin tira koob rasmi ah isagoo tusaale usoo qaatay dhanka gargaarka iyo arimo kale. Tirakoobka qabyada ah ee aan rasmiga aheyn hadda waxa uu noqday 12 milyan iyo.360 kun in ay yihiin dadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka ilaa hadda inta la tiro koobay iyadoo aan weli tiro koob dhameystiran lagu sameyn muwaadiniinta dalka dibadiisa kunool.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka waxbarashada dalka ayaa yiri “ Dowladda Federaalka waxaa ka go’an sidii loo heli lahaa waxbarasho tayo leh oo ay dhammaan caruurta Soomaaliyeed helaan. 18kii September 2014 waxaa imtixaanka Jaamicadda Ummadda u fadhiistay in-kabadan 480 arday oo kuwii ku guuleysta ay noqon doonaan ardeydii ugu horreysey ee Jaamicadda Ummadda Soomaaliyeed tan iyo burburkii dalka sanadkii 1991. Wasiir ku Xigeeenka Wasaarada Hidaha iyo Tacliinta Sare Maxamed Axmed Kulan iyo Gudoomiyaha Jaamacada Umadda Soomaaliyeed Jimcaale ayaa goob joog ahaa imtixaanka oo kormeerayey isla markaasna dhiirigalinayey ardeyda imtixaanka u fariisatay. Jaamicadda Ummadda ayaa ku bilaabeysa 6 kuliyadood iyadoo la rajeynayo in la kordhin doono kuliyadaha waxbarasho ee Jaamicadda. Sidoo kale 18kii September 2014 ayuu Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Xassan Maxamed Xuseen (Muungaab) uu xariga ka-jaray Iskuulka Maxamud Mire ee degmada Waaberi kadib markii dayactir lagu sameeyay kaasoo ka mid ah dugsiyada ay dowlada Soomaaliya maamusho islamarakaana ay si bilaash ah wax ugu bartaan ardayda Soomaaliyeed ee kunool degmada Waaberi iyo deegaanada ka ag-dhow. Dowladda Federaalka ayaa ugu baaqday waalidiinta Soomaaliyeed inay waxbarasho geeyaan carruurtooda.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey shirka London ee lagu taageerayey ciidanka XDS ayaa yiri “Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda iyo wafdi uu hoggaaminayey ayaa ka qeybgalay shir ay soo qaban qaabisay Dowladda UK, isla markaana aya si wadajir ah u wada shir-guddoominayeen Dowladaha Somalia iyo UK ayaa lagu qabtay London 18kii September 2014. Shirkan ayaa looga hadlayey sidii beesha caalamka u taageeri laheyd ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed (XDS) si loogu diyaariyo inay amniga dalka la wareegaan mustaqbalka dhow. Ra’iisul wasaaraha ayaa waxaa ku wehliyey shirkan amniga Wasiirka Gaashaandhiga, Wasiirka Warfaafinta, Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed (XDS) iyo mas’uuliyiin kale. Ujeedooyinka kulanka Amniga ayaa waxaa ka mid ahaa in la hubiyo in waddamada deeqaha siiya Somalia ay kordhiyaan taageeradooda ciidanka XDS si ay u hantaan soo celinta amniga Dalka. Dowladda Federaalka ayaa shirka hor-dhigtay qorsheyaasheeda ku aadan sidii ciidanka XDS dib loogu dhisi lahaa, isla markaana ciidamada maleeshiyaadka loo mideyn lahaa, iyadoo la dhowrayo nidaamka cunaqabateynta hubka, iyo ilaalinta xaquuqul insaanka. Kulankan ayaa waxaa ka soo baxay go’aano muhiim ah oo ay ka mid yihiin in la isku raacay qorshaha horumarinta ciidanka XDS tan iyo 2019ka, in deeq bixiyeyaasha ay kordhiyaan taageeradooda ku wajahan ciidanka XDS, iyo in Somalia iyo UK ay ka wada shaqeeyaan sidii loo dabo gali lahaa ballanqaadyada la sameeyey. Dowladda Federaalka ee Somalia ayaa si hagar la’aan ah ugu mahadcelisey Dowladda UK oo runtii muujisey door hoggaamineed ee arrimaha Somalia.”
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey guulaha howlgalka Militariga ee Badweynta Hindiya ayaa yiri “Howlgalka Badweynta Hindiya ayaa laga gaaray guulo waaweyn oo kooxaha nabad-diidka ah laga saaray goobo fara badan. 13kii September ayaa Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa AMISOM ay si buuxda ula wareegay tuulooyinka Moqokori, Yasooman iyo Aboorrey ee Gobolka Hiiraan. Ciidamada ayaa tuulooyinkan kula wareegay si nabadgelyo ah kadib markii ay isaga baxeen malleeshiyaadka Al-Shabaab ee deegaannadaasi dadka ku dhibaateeyn jiray, waxaana ciidamada si farxad leh usoo dhaweeyay bulshada ku dhaqan tuulooyinkaasi. Korneyl Cali Dhuux Cabdi Mahadalle oo ka tirsan Saraakiisha Booliska ee Gobolka Hiiraan, ayaa sheegay in tuulooyinkaasi la soo geliyay gacanta dowladda. Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan C/fataax Xasan Afrax, ayaa ku dhawaaqay in malleeshiyaadkii Al Shabaab laga wada saaray gebi ahaanba Gobolka Hiiraan, marka laga reebo meelo yar yar oo ay si dhuumaaleysi ah ku jooggaan. Dowladda Federaalku wey ka go’antahay sidii kooxaha argagaxisada ah looga saari lahaa dhammaan dalka oo dhan si dadka deegaanadaas ay u helaan fursad ay dib u dhiska dalka iyo horumarka uga qeybqaataan. Dowladda ayaa uga mahadcelisay waddamada aan saaxiibka nahay ee marwalba diyaar ka u ah sidii dalka Somalia uu cagihiisa isagu taagi lahaa.”
– DHAMAAD – Wasaaradda Warfaafinta & Hannuunita Dadweynaha – media@moi.gov.so
Muqdisho: Maareeyaha duulista hawada oo isku day dil ka badbaaday
Madaxweyne Xasan oo si rasmi ah xilka uga qaaday Agaasimihii Nabad Sugidda